ज्ञानी नानी-विनोद रोका – Real khabar online
ज्ञानी नानी-विनोद रोका
२०७८ असार ९ गते २:४१ Realkhabar
विनोद रोका, न्युर्योक-
आमा बाबा भन्नु हुन्छ तिमि कत्ति ज्ञानी
सानैदेखि बसाऊदैछौ राम्रा राम्रा बानी
बिहान ऊठि सफा भई ताजा खाजा खान्छु
स्कुलमा खान पनि घरबाटै बोकी लान्छु
आदरभाव सबमा राख्छु चाहिदो मात्र बोल्छु
नजानेको कुरा सबै गुरुलाई सोध्छु
साथीसंग मिलिजुली खेल्छु रमाएर
भिडभाडमा हिडछु म बुबाको हात समाएर
स्कुलबाट घर आई अर्को लुगा लाऊछु
खाजा खाई होमवर्क अनि नाच्छु गाऊछु ।
यो गीत मैले धेरै अगाडी लेखेको हु । स्कुल पढन जाने ले पनि वयस्कहरुले गाऊने गीतमा नाचगान गर्ने गरेको देखेर मैले यो गीत लेखेको थिए। त्यसबेला हाम्रा छोराछोरी पनि स्कुलमै अध्ययन गर्दथे। यो गीत त्यसै थन्कीएको थियो। गायन र सगीतमा लाग्नेहरुले प्रेम र वियोगमा आधारित गीत मात्रै माग्दछन। किनकि यस्ता गीतहरु बच्चादेखि बृद्धासम्मले रुचाऊछन । अनि लगानी उठछ । नानीहरुको लागि बजारमा ल्याएका गीत संगीत भर्ने, गाऊने, र बजाऊनेको प्राथमिकतामा पर्दैन। अनि नानीहरुको लागि वयस्कका लागि तयार भएका गीत सुन्नु र त्यही गीतमा नाच्नुको बिकल्प हुदैन।
केही बर्ष अगाडी साहित्यकार निलम कार्की “निहारीका” बहिनीले नेपालमा एकजना प्रतिभासाली विद्यार्थी सरिता अधिकारी र अध्यापक कार्तिकेय घिमिरेजीको बारेमा कुरा गर्नु भयो। संगीत संयोजनको लागि चाहिने न्युनतम खर्च दिदा कार्तिकेय सरले संगीत र सरिताले गाऊछिन भन्नु भो। अनि मेरो पुरानो यो बालगीत र साहित्यकार गीता खत्रीले दिएको गीत निलमलाई जिम्मा दियौ। निलमले आफनो समेत गरी तीन वटा गीत उता दिनु भएछ। निलमको गीत अमm सरिताको स्वर मा खुलेको छ। किनकि निलमको “दृष्टिविहिन मलाई यो सुन्दर संसारमा के हेर्न पठायौ दैव< भन्ने भावले गीतले आखा रसाऊछन। सबै गीतहरुलाई र्काितकेयजीले राम्रो संगीत र सरिताले मिठो स्वरमा सजाऊनु भएको छ।
जुनबेला यो गीत निस्कीयो त्यति बेला मेरा छोराछोरीहरु वयस्क भै सकेका थिए । यो बाल गीत मैले डा. राजु अधिकारी र संन्तोषीजीको मेधावी छोरी अपालालाई न्युजर्सीमा सुनाए। ऊनी ४ बर्ष लाग्दैछिन। अपाला यो गीत आफनो तोतेबोलीमा गाऊने गर्छिन। त्यसैगरी मेरो चार महिना लाग्न लागेको नाती। छोरी अन्जलीको छोरा लुईसलाई रिजमण्ड भर्जिनियामा सुनाए। गीतको अर्थ नबुमmे पनि मिठो संगीतमा ऊ रमायो। एऊटा पुस्ताका लागि रचियको यो गीत अर्को पुस्तासम्म पुग्दा पनि असान्र्दभिक लाग्दैन। अपाला र लुईससंग खिचाएको फोटो यो गीतमा राख्ने अनुमति दिने डा. राजु अधिकारी, सन्तोषी र छोरी अन्जली र इएन प्रति आभारी छु। कार्तिकेय घिमिरे र सरिता अधिकारी बहिनीको फोटो पाएभने यो गीतलाई परिमार्जन गर्ने छु।आशा छ यहाहरुले एक पटक सुनिदिनु हुने छ ।
यो गीतको संगीत दृष्टिविहीन संगीतकार रमेश सुवेदीले गर्नुभएको हो र यो गीति एल्बम तयार गरी दृष्टिविहीन बालबालिकालाई यो गीति एल्बम र सुन्ने कथाको अडियो बुक पेनड्राइभमा राखी निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यको संयोजन कार्तिकेय ट्रस्ट नेपालले गरेको हो ।